Marie Bohner: GV no nahazoako fahatokisantena hanoratra · Global Voices teny Malagasy
Marie Bohner: GV no nahazoako fahatokisantena hanoratra
Voadika ny 12 Jolay 2019 13:13 GMT
Frantsay ny reniny ary Alemàna ny rainy, tanaty tontolo iraisampirenena sy miteny fiteny maro no nitomboan'i Marie Bohner satria tanaty taranja iraisampirenena izy no nobeazina. Hatramin'ny fahazazàny, nanana namana avy aminà firenena sy lafivalo isankarazany izy, izay tonga mitondra ny kolontsain-dry zareo, ny mozikany, ny fiteniny, ny fomba nahazatra azy ary ny vazivazin-dry zareo. Mbola ifandraisany foana ankehitriny ny sasantsasany amin'ireny finamànana natombony hatrany amin'ny kilasy garabola ireny ary toy ny fianakaviany faharoa hoy izy mantsy ahy.
Raha tsy teo izay tontolo iraisampirenena izay, na izany teo amin'ny fiainany manokana, na tamin'ny asany, sy ireny fifandraisana ara-kolontsaina marolafy ireny, dia nisy zavatra banga teo aminy. Vitany ny nameno io filàna mifandray amin'ny hafa io tamin'ny fisafidianana ny sehatra niasàny. 10 taona teo ho eo izy no niasa teo amin'ny sehatry ny kolontsaina tao Frantsa, indrindra fa tao anatin'ny fikarakaràna fampisehoana velona, mba hikarakaràna ireo asa famoronana sy fampisehoana entina mitety faritra, indraindray any amin'ny faritra ambanivohitra, any anaty trano fitahirizana vokatra na ireo kilasimandry any ambanivohitra.
Rehefa nandeha ny fotoana, lasa tèry ho azy i Frantsa, Ary amin'ilay maha-lava tongotra azy, ny filàna mahita tontolo iray mivelatra kokoa, manankarena kokoa ara-kolontsaina sy ara-piteny samihafa, no nahazo laka be tao aminy. Izany no nifanenan'ny làlany tamin'ny an-dRtoa Aye Aye Win. Ity ramatoa mpikatroka ho an'ny Zon'Olombelona ity no mpanorina sady talen'ny Dignity International. Rtoa Win dia isan'ireo olona izay mety hanova ny fiainan'ny zatovo iray ny mifanehatra aminy.
Tamim-pientanentanana tokoa no niresahan'i Marie ny zavatra niainany niaraka tamin-dRtoa Win sy ny ONG Dignity International, izay nanaisotra azy tao anatin'ny tontolo frantsay nisy azy ka nitsofohany tampoka tao anaty tontolo iray feno olona avy amin'izao tontolo izao, izay nofaritany tamin'ny hoe ‘tsy mampino’, mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, feno fahasahiana, miasa an-tsitrapo ary tena maha-te-ho-tia. Tolona ataon'ny ONG Dignity International ny hisian'ny tontolo iray izay iarahan'ny olombelona rehetra miaraka misitraka sy miaina feno ao anaty fahamendrehana, tsy misy tahotra, lavitry ny fahantràna sy ny fanavakavahana.azy. Ny iraka sy tanjona tratrariny dia ny hiaro sy hanohana ny fahavitantenan'ireo vondrom-piarahamonina miaina anaty fahantràna sy fanilikilihana, ka ho afaka hitaky ny zon-dry zareo ary ho afaka hisitraka ny rariny ara-tsosialy.
Ankehitriny izy dia manao asan'ny mpanao gazety miasa tena, mpandrindra tetikasa ary fakankevitra any anatin'ireo sehatra maro samihafa, toy ny zo hanana kolontsaina, ireo tetikasa eny an-toerana ao Alsace faritra misy azy, any amin'ireo fikambanana iraisampirenena mpiaro zon'olombelona toy ilay hetsika sosialy indiàna Ekta Parishad.
Ny fahalianana ananany no nitondra azy hiasa tao Alemaina, Hongria ary India. Mianatra ny fiteny Hindi izy ary mivezivezy be, zavatra iray tena mahasambatra azy.
Suzanne Lehn no nampiditra azy tato amin'ny Global Voices. Samy nonina tao Strasbourg rahateo izy roa, tafahaona nandritra ny fisakafoanana iray izay nandritra izany koa no nahafantaran'izy roa, rehefa tafaresaka, fa hay samy naniry ny handray anjara tamin'ilay Vovonana Sosialy Erantany tao Tunis. Saingy indrisy fa tsy afala nankany i Marie. Na izany aza, nitera-bokatra ny fihaonan-dry zareo satria nanomboka nanoratra ho an'ny GV i Marie, teo ambany fanarahamaso be fitiavana sy malina nataon'i Suzanne, araka izay nambarany izy tenany rahateo. Ny fahafantarany an'i Suzanne no nahafahany koa nahatsapa ny hetahetany hanoratra, satria nandrisika azy tamin'ny nitenenany hoe mety hahaliana olona hafa ny zavatra soratany. Sambatra i Marie, nilaza fa nahazo namana iray sy varavarana misokatra ho amina tontolo iray vaovao. Nanomboka namaky ireo lahatsoratry ny GV izy, mikasika lohahevitra marobe sy toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ho azy, toy ny hoe taratasy iraisampirenena ilay izy, tsara kokoa noho izany aza, fa an'ny tena manokana.
Satria tena ao anatin'ny zotran'ny asany tanteraka izy, miasa amin'ny fomba tsy miankina, hitany fa ny GV dia nanome azy tambajotra iray tsy mampino ahitàna ireo matihanina maro sy fomba fijery avy amin'ny lafivalon'ny tany. Toeram-pitrandrahana iray ifanenan'ny kolontsaina isankarazany. Satria izy mivezivezy be, dia misy hatrany GVer iray any ho any afaka hihaonana; toy ilay nihaonany tamin'i Aparna tao Calcutta, Filip tao Skopje ary Lova tao Parisy…
Hitan'i Marie ihany koa fa misy hatrany ireo fanambaràna mahaliana mivoaka any anaty lisitra imailaka GV, sy torohevitra sarobidy mba hanoratana tsara kokoa sy hizaràna vaovao amin'ny fomba hafa. Hitany fa mampanankarena ny fahalalahana misafidy lohahevitra ary ny fomba ikiràna azy ireny amin'ny fandehanana mitety bilaogy sy media sosialy, miala lavitra an'ireo fampahalalambaovao nahazatra.
Heveriny fa noho ny fahazàrany manoratra tsy tapaka ho an'ny GV no nahafahany nahazo ireo iraka vitsivitsy arak'asa manodidina ny asa fanoratana sy ny fifandraisana. Amin'izao fotoana izao, manoratra ihany koa izy ho anà media kolontsaina 2 , anisany ny.rue89strasbourg.com. Iray tamin'ireo fandraisany anjara ho an'io media io ilay nitondra ny lohateny hoe Macbeth tao Maillon, fangataham-panazavana nirohondrohona izay voatsidika efa ho in-1000.
Nomen'ny GV azy ny fahatokisantena hanoratra. Rehefa vakiana ireo fanehoankevitra feno fideràna momba ny kalitaon'ireo fitsikerana tsirairay ataony, tsy misy azo atao afa-tsy ny manantena ny mba haharetan'izany hatramin'izay ela indrindra.
Tantaran'ny vondrom-piarahamonina farany
HORONANTSARY: Fantaro i Marina Khonina, mpitantana ny tetikasa Lingua antsika vaovao!
Mediam-bahoaka 04 Mey 2022
Songadina Global Voices Martsa 2022
Mediam-bahoaka 06 Avrily 2022